Xulka Ingiriiska Oo Isaga Huleelay Ciyaaraha Koobka Adduunka Iyo Croatia Oo Xalay U Gudubtey Final-ka Koobka Aduunka |
Xulka Ingiriiska Oo Isaga Huleelay Ciyaaraha Koobka Adduunka Iyo Croatia Oo Xalay U Gudubtey Final-ka Koobka Aduunka
Moscow (GNN):- Ciyaartii nus dhamaadka ee koobka adduunka ee
dhexmartay xulalka Ingiriiska iyo Croatia ayaa waxaa ay guusha raacday xulka Croatia oo dad badani aya sadaalinayeen in Ingiriisku uu kusoo bixi doono.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa xulka Ingiriiska waxaa ay u muuqdeen kuwa dardar ku socda, oo waxaa daqiiqadii 5aad gool u dhalilay Kieran Trippier oo laad xor ah la eegtay goolka xulka Crotia.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa sidaasi kusoo idlaatay oo xulka Ingiriiska ayaa ku gacan sareeyay.
Hasayeshee markii dib la isugu soo laabtay qeybtii dambe ee ciyaarta, xulka Croatia waxaa ay u muuqdeen kuwa dardar horleh la yimid ciyaarta, waxaana daqiiqadii 68 goolka barbaraha u dhaliyay Ivana Perisic oo waxaa ay ciyaartu sidaasi ku noqotay min hal iyo hal gool.
90 daqiiqo ee ciyaarta ayaa dhamaaday oo labada kooxood ba waxa ay isla dhaafi waayeen min hal gool, waxaana taasi ay keentay in ciyaarta lagu daro soddon daqiiqo, marka laga tago dhowr daqiiqo oo lagu daray sagaashankii daqiiqo.
Tobankii daqiiqo ee ugu dambeesay qeybtii labaad ee soddonka daqiiqo ee lagu daray ciyaarta ayaa xulka Croatia waxaa ay nasiib u yesheen in gool lama filaan ah ay ka dhaliyaan Ingiriiska, waxaana goolka u dhaliyay Mario Manzukich.
Xulka dalka Croatia ayaa sanadkii 1998 kusoo biiray ciyaaraha koobka adduunka. Dhanka kale taageerayaasha xulka Ingiriiska ayaa waxaa ay u aheyd maalin murugo, maadaama xulkii ay ku hanweynayeen inuu gaaro ciyaarta kama dambeysta ee koobka adduunka laga adkaaday.
Markii ay ciyaartu dhamaatay ayaa waxaa debaal degyo aad u ballaaran ay ka dhaceen caasimadda dalka Croatia ee Zagreb iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi, waxaana sidaasi ay guusha ku raacday xulka Croatia oo u gudbay ciyaarta kama dambeysta ee koobka adduunka oo maalinta axada ahi dhexmari doonta xulka Fransiiska iyo Croatia.